သင့်ကလေးကို ဘာကြောင့်ရေကူးသင်ပေးသင့်ပါသလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးကျန်းမာရေး » သင့်ကလေးကို ဘာကြောင့်ရေကူးသင်ပေးသင့်ပါသလဲ
ရေကူးခြင်းသည် ကလေးများ အနှစ်သက်ဆုံးသော ကစားနည်းဖြစ်သည်။ ကလေးများသည် ရေကူးကန်ထဲတွင် တစ်နေကုန်ဆော့ရခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော် ရေကူးခြင်းသည် အပျော်သက်သက်သာမဟုတ်ပဲ သေချာစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျှင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရနိုင်သည့်အပြင် အသက်ကိုလည်း ကယ်နိုင်သည်။
မတော်တဆ ရေနစ်ခြင်းသည် တစ်နှစ်မှ လေးနှစ်အတွင်းတွင် ကလေးများသေဆုံးသော အကြောင်းရင်းထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သင့်ကလေးကို ထိုအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် ရေကူးသင်ပေးသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးကို တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန် ရေကူးသင်တန်းသို့ သွားရောက်အပ်နှံသင့်သည်။
ကလေးအများစုသည် ရေကူးကန်သို့ ရေသွားကူးရန် မိဘများကို တောင်းဆိုကြသည်။ ပူအိုက်သည့်ရာသီတွင် ရေကူးရခြင်းသည် ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးကို ဘေးကင်းစွာ ရေကူးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသင့်သည်။ သင့်ကလေးကို ရေရှိသည့်နားသို့ မသွားခိုင်းမည့်အစား ရေကူးတတ်စေရန် သင်ပေးသင့်သည်။ သင့်ကလေး ကျွမ်းကျင်စွာရေကူးတတ်လျှင် သူ၏ သူငယ်ချင်းများနှင့် ရေကစားသည့်အခါတွင် သင်စိုးရိမ်ရန် မလိုတော့ပေ။
ရေကူးခြင်းသည် အသက်အရွယ်မရွေးလုပ်သင့်သော အားကစားနည်းလည်းဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးကို ငယ်စဉ်မှာပင် ရေကူးသင်ပေးလျှင် သင်ကလေးသည် ဘ၀တစ်လျောက်လုံး ထိုအတတ်ကို မမေ့ပဲဆက်လက်အသုံးပြုသွားနိုင်သည်။ ရေထဲတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် လူကြီးများအတွက် အလွန်ကောင်းသည်။ မလှုပ်ရှားနိုင်သည်များကို သက်သာစေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံခိုင်စေသည်။ ရေကူးခြင်းသည် အန္တရာယ်မရှိသောကြောင့် အသက်ကြီးသူများအတွက်လည်း စိတ်ချရသော အားကစားနည်းလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြေးသည့်အခါ၊ စက်ဘီးစီးသည့်အခါ လဲကျမည်ကို စိုးရ်ိမ်နေရသည်ထက် သင့်ကလေးကို ရေကူးလေ့ကျင့်ပေးရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ကလေးတိုင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် ရေကူးသင်သင့်ပါသည်။ ရေကူးခြင်းတွင် အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့် သင့်ကလေးသည် ဘ၀တစ်လျောက် ရေကူးခြင်းကို ဆက်လေ့ကျင့်နိုင်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်သည်။ အသက်ငယ်စဉ်မှာပင်မှာပင် ရေကူးသင်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့၏ ဘ၀တစ်လျောက်တွင် အခြားသော စွမ်းရည်များကိုလည်း ရရှိနိုင်စေပါသည်။
ကလေးကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နို့ဖြတ်ခြင်း ။ ကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုး
သင့်ကလေး ဘာကြောင့် စိတ်တိုတာလဲ
ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စကျတငျဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စကျတငျဘာ 12, 2017
5 REASONS WHY YOUR CHILD SHOULD LEARN TO SWIM NOW.
https://goldfishswimschool.com/blog/5-reasons-why-your-child-should-learn-to-swim-now/. Accessed December 14, 2016.
Why your child should learn to swim.
http://www.swimming.org/learntoswim/why-your-child-should-learn-to-swim/. Accessed December 14, 2016.
http://www.parents.com/fun/activities/outdoor/teach-your-child-to-swim/. Accessed December 14, 2016.